DUBAI: Ihe Nlereanya nke Development | Site na Zero na Hero!
Mbido amuma sitere n'aka Mohammed bin Rashid Al Maktoum
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at June 13, 2019
Dubai: Ihe Nlere nke Mmepe
O siri ike ikwere ma na-adọrọ mmasị na Dubai gara
Ebe E Si Nweta: Foto nke Dubai na 1960s na 1970s egosi obodo dị ka ọzara Desert: Ụlọ elu towertower gburugburu dị n'akụkụ Deira guzo gburugburu ájá ...
N'ebe a di egwu
O dikwa n ’ike, kwa ubochi enwere mgbanwe ohuru na gburugburu ya. Mpaghara nke United Arab Emirates bụ ihe atụ pụrụ iche nke ihe anyị na-akpọ mmepe. O juru ụwa ndị ọzọ anya na otu esi esi n’ala, ájá na ọzara emechaala wee bụrụ ihe ọ bụ taa. Enweghị ego na teknụzụ ọ bụla, obodo a gbanwere ụdị nsogbu ndị ahụ wee merie ndị nwere agba na-efe efe. Ọ na - enye m nwamba mgbe m nwara ịche ịsị na ọ gaara esi ike inweta ụdị a nke enwere ugbua na ngalaba niile ọ bụrụ na ọ na - emepụtagharị onwe ya, na - ewu ihe mgbochi ụwa na teknụzụ.
Ebe a na-ejide azụ na mmiri pel ruo otu puku afọ, ebe a na-ede ihe ndekọ mbụ nke obodo ahụ na 1799 mgbe ụlọ Bani Yas guzobere ya dị ka ihe ndabere nke Abu Dhabi.
Dubai ghọrọ Sheikhdom dị iche iche na 1833 mgbe usoro eze Al-Maktoum weghaara ya n'udo. The Great Depression of 1929 mere ka a daa n'ahịa pearl ala, Sheikh Saeed na-achọ ebe ọzọ isi enweta ego na akpọ India na Iran ndị na-ere ahịa ebe a na-akwụghị ụtụ isi. Site na mmanụ nchọta na 1966, mba gbanwere karịa nke amara ma duga Dubai ịghọ ihe na-adọrọ adọrọ, nke ọhụụ. azụmahịa hiwere isi n’obodo. Ee e, mba ọzọ ga - eche na ozugbo obodo oke osimiri ga-abụ nnukwu ọrụ na akụnụba ụwa.
Ugbu a, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum bụ osote onye isi ala nke United Arab Emirates na onye na-achị Emirate nke Dubai na ndị otu ya nke ndị minista na-arụ ọrụ dị ukwuu iji nọgide na-enwe ọkọlọtọ ma na-eme ka ọ bụrụ ikike dị ukwuu na usoro ọgbaghara dị mma na mmekọrịta mba ụwa.
Nsonaazụ kachasị mma nke mbọ ha bụ mmalite nke EXPO 2020, Dubai ga-akwado ya nke sitere na The Bureau International Des Expositions General Assembly nyere na Paris na November 27, 2013. A na-atụ anya na Expo ga-agbakwunye nnukwu ego dirhams na akụ na ụba Dubai na UAE.
Ala a bụ ma ga - arụ ọrụ dị ka nnukwu magnet maka ahịa akụ na ụba.
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.